Suxufiyiin codsaday in cadaaladda la horgeeyo horjooge Xasan Xanafi – Radio Muqdisho
Suxufiyiin codsaday in cadaaladda la horgeeyo horjooge Xasan Xanafi
Suxufiyiinta ka howlgasha gudaha dalka ayaa soo dhaweeyay talaabadii dowladda Kenya ay gacanta dowladda Soomaliya ku soo gelisay dhagar qabe Xasan Xanafi oo maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Kulankaan oo ay ka qeyb galeen qaar ka mid ah madaxda Warbaahinta dalka ka howlgasha, ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ, Wariyeyaal uu dadkooda shirqool ku dilay Horjooge Xasan Xanafi iyo kuwa kale, waxaana uu ahaa mid lagu soo dhaweynayay qabashada horjoogahaasi maleegay dilalka suxufiyiin Soomaaliyeed.
Ugu horeyn Kulanka waxaa ka hadlay Cabdiqaadir Maxamed Faarax ”Dulyar” oo ka mid ah Wariyaasha Soomaaliyeed ayaa codsaday in Maxkamad la soo taago horjooge Xasan Xanafi si caddaaladda loo marsiiyo, isagoo u tacsiyadeeyay ehelada suxufiyiinta Xasan Xanafi uu shirqoolka ku dilay.
Sidoo kale Agaasimaha Radio Kulmiye Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka hadlay kulankaas ayaa ka sheekeeyay Dilalka iyo dhagarta Xasan Xanafi uu u geeystay Wariyaal badan, waxaana uu codsaday in Sharciga la marsiiyo dhagar qabahaasi.
Kulankaan lagu soo dhaweynayay qabashada Xanafi waxaa sidoo kale ka hadlay Wariyeyaal iyo ehelada Suxufiyiinta uu shirqoolay Xasan Xanafi oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan maagaalada Muqdisho.
Maxamed Ibaarhim Bakistaan ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in uu gacanta Dowladda Soomaaliya ku jiro Xasan Xanafi oo loohaysto shirqoolo iyo dilal loo geeystay Suxufiyiin badan.
Ku simaha Agaasimaha Warbaahinta Qaranka ahna Agaasimaha Radio Muqdisho Mudane Cabdiraxiin Ciise Caddoow oo ah ayaa tilmaamay inay soo dhaweynayaan talaabada lagu soo qabtay horjooge Xasan Xanafi Xaaji, waxaana uu umahad celiyay laamaha ammaanka ee suuro geliyay in la soo qabto.
Cabdiraxiin Ciise Cadoow ayaa sidoo kale fariin u diray Maxkamadaha Dalka, taas oo ku aadan in Maxkamadeeynta Xanafi Warbaahinta ay ka qeyb gasho si loogu caddeeyo Dilalka iyo Danbiyada uu ka galay bahda Saxaafada Soomaaliyeed.
Dhanka kale suxufiyiinta ka howlgala gobolka galgaduud ayaa soo dhaweeyay soo qabashada Xasan Xanafi
Maamulka Degmada Heliwaa oo sheegay in suuqyada degmadaasi laga bilaabo doono qaadista cashuuraha